Kuwa kweFlash uye kukunda kwewebhu zviyero | Linux Vakapindwa muropa
Tinorega Iyi nyaya muna 2006 apo, yakabatana neYouTube uye mamwe mawebhusaiti ekushambadzira nemitambo, Flash yakabatanidzwa setekinoroji iyo iri yekudyidzana uye multimedia paInternet. Asi, gore rakatevera, chigadzirwa chitsva chaizotanga maitiro akapera pazuva rekupedzisira ra2020.
Muna 2006 Adobe anotenga Macromedia, Makambani ese ari maviri aive achigadzira graphic dhizaini software, uye kuwanikwa kwakabvumidza Adobe kuti isangobvisa zvigadzirwa zvinokwikwidza, asiwo kupinda mumusika wekugadzira webhu. Adobe yakanga isina kumbobvira ine hushamwari yeLinux uye kuvandudzwa kwemutambi weLinux kwaizomiswa kusvika kutsakatika muna 2012. Kana iwe waida kuenderera uchiona Flash yezviri mukati, iwe waifanira kuisa iyo Chrome browser. sezvo Google yaive pamusoro pekugadzira inoenderana plugin.
Muna 2016 apo kudikanwa kweFlash, uye zvichidaro chikamu chayo chemusika chakaderera zvakanyanya, Adobe yaida kumutsa mutambi weLinux uye ndokuvimbisa kugadzirisa pamwe neWindows neMac. Asi, zvaive zvanyanyisa.
1 Kuwa kwe Flash
Kuwa kwe Flash
Gore rimwe chete Adobe atenga Macromedia, iyo iPhone inotangwa. Adobe haina kuzombokwanisa kugadzira vhezheni yeFlash isingashandise zviwanikwa zvitsva zvechigadzirwa, saka makore matatu gare gare, Steve Jobs (kana, kana tikatenda iyo HIstory chiteshi, vatorwa vachimukurudzira) vakasarudza kumubvisa pachigadzirwa.
Tinofanira kufunga nezvezvinhu zviviri, yekutanga ndiyo charisma yaSteve Jobs. Kana akati iwe haudi chinhu, mamirioni avanhu kutenderera pasirese akarega kuchida. Chechipiri ndechekuti Dzimwe nzira dziri nani dzaive dzatotanga kuoneka.
Pakutanga kwa2004, Apple pachayo, pamwe neMozilla neOpera, yakanga yaumba boka rinoshanda kuti riumbe vhezheni itsva yeHTML, mutauro wekugadzira mapeji ewebhu. Iyi vhezheni itsva yaizosanganisira matekinoroji ekuwedzera kudyidzana uye kuisa zvemultimedia zvemukati pawebhu. Gore rinotevera, mubatanidzwa weW3C unobatana nechirongwa ichi.
Ngatibude pachena kuti chinhu cheMabasa chaisave cherudo rweyakavhurika mwero. Iyo iPhone yakauya neayo yayo mutambo uye app chitoro ecosystem. Uye, Flash, yaibvumidza iwe kuti ugadzire mitambo uye zvishandiso zvekushandisa online. Kubvisa Flash kwaireva kubvisa makwikwi.
SDai iwe waive mugadziri wewebhu uye iwe waida kuti nzvimbo dzako dziwonekwe muApple zvigadzirwa, iwe waifanira kutanga kushandisa HTML5, CSS3 uye JavacriptSezvo zva2008 pakanga patove nemabhurawuza edesktop anoenderana neyakajairika mamiriro, kuyedza kuve nemapeji maviri akasiyana kwakamira kuita zvine musoro.
Pakupedzisira Adobe inosiya kuvandudzwa kweFlash yeApple muna2012.
Kurova kukuru kweiyi tekinoroji pasina mubvunzo kwakabva kune mumwe mutyairi. YouTube yakatanga kuyedza HTML5 mutambi muna 2010.
Muna 2007 Microsoft yakatanga mhinduro yayo yekukwikwidzana nechigadzirwa cheAdobe. Yaidaidzwa kuti Silverlight uye yaive neyakavhurika sosi shamwari yayo yainzi Mwedzi. Ini pachangu, handina kumbobvira ndawana Mwenje weMwedzi kuti ushande.
Silverlight yaive yakabudirira mumusika wemakambani. Muchokwadi fiwe iyo tekinoroji inoshandiswa musimboti neNetflix uye nevamwe vanopa zvemukatikana. Nekudaro, Microsoft pachayo yakabatana neHTML5 rekuvandudza boka rinoshanda uye yaive inoshingaira nhepfenyuro yeiyo standard. Muna 2013, Netflix yakatanga mobile pilot test yeHTML5 player.
Mbambo yekupedzisira mubhokisi raFlash yakaiswa neW3C muna2017.
World Wide Web Consortium ndicho chinzvimbo chinotarisa kuvandudzwa kwewebhu zviyero. Mushure mekukurukurirana kwakawanda, akabvumidza kushandiswa kwewedzero inonzi Encrypted Media Extensions (EME).
Nekuda kwekuwedzera uku, vanopa zvemultimedia zvemukati vanogona kushandisa anti-kopi mhinduro pane zvemukati zvinoonekwa nevatambi veHTML5. Kana iwe ukapinda saiti seNetflix kana Spotify kekutanga kubva kuLinux, iwe uchaona meseji kubva kubhurawuza rako ichikukumbira kuti uise imwe yekuwedzera. Izvo chaizvo ndizvo zvinobvumidza kutsanangura zvakapfuudzwa zvemukati.
Makore ekupedzisira ehupenyu hwake Flash hwaive husiku hwekuchengetedza (Iyo jee yaive yekuti vakawana kodhi pakati pemabhureki ayo) uye, mushure mekunge mabhurawuza makuru azivisa kuti vaizovhara, Adobe akazivisa kuti yaizomira muna 2020.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuwa kwe Flash uye kukunda kwewebhu zviyero